लक डाउन फेरि लम्ब्या उने तयारी, फेरि कति दिन थपिदै छ त ? हेर्नुहोस – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/लक डाउन फेरि लम्ब्या उने तयारी, फेरि कति दिन थपिदै छ त ? हेर्नुहोस
२३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वैशाख २५ गतेपछि पनि लकडाउन लम्ब्याउन संकेत गरेको छ । यद्यपि यसबारे भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सहभागी कोभिड-१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मंगलबारको बैठकमा जोखिमका आधारमा ७७ जिल्लालाई रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्रमा विभाजन गर्ने र त्यसअनुसार लकडाउन कडा वा खुकुलो बनाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमत नदेखिएको समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले अहिले नै क्षेत्र छुट्याएर जान सकिन्छ र भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘त्यसमा उहाँको दुईवटा तर्क थियो’ एक मन्त्रीले भने, ‘एउटा भारतमा संक्रमणको अवस्था जोखिमपूर्ण देखिएको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ नै । अर्को, हाम्रो टेस्ट पनि पुगेको छैन ।’
अहिले नै सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न नसकिने भएकाले परीक्षण बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुटवल मा आफ्नै बाबुले ८ बर्षको छोरालाइ जिउदै गाडे …
बुटव,लमा एक महि,लाको स्कु,,टर खोसेर ज,लाउने युवाहरु प,क्राउ
भ,र्खरै म,न्त्रीपरिषद को यस्तो नि,र्णय : सिमा नाका र अन्त,र्राष्ट्रिय उडान …